page20 by giriyaadnews | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
page20 by giriyaadnews
Posted on Juunyo 13, 2011 by giriyaadnews
p:Heestii Awdal State Lama Aasi karo : Waxa lagu tumay Muqdisho Hobolada Qaranka Soomaaliyeed oo ay ka dhex Muuqdaan Maxamuud Qoox Qarboosh iyo Muslimo Qaasim Hilawle.. Jun 04,201
New Video: Ciyaar Saaxiibtinimo oo Todobaadkan Borama ku dhex martey Awdal State iyo SSC
Kooxda Casaanka iyo Cadaanku waa SSC halka Unifoomka Madawguna uu yahay Awdal State
giriyaad Commen»ew Video:Sir Baxday: Olole Xukumada Silaanyo la wado tijaar Reer Gabiley ah si xeebaha AWdal loogu beero dad lagu qiyaasay 19,0391 oo dhawaan la liis gareeyey .
Djibouti(Saylac.com)- Qorshahan oo ay wadaa tijaar u dhalatey Beesha dhexe ee Somaliland oo ay ugu horeeyaan Mulkiilaha Maansoor Hoteel Cabdulahi Xaashi Cimi iyo Shirkada Dahabshil ayaa waxa keenay ka dib markii dhawr jeer lagu guulaysan waayey in lagu caleemo saaro Ugaas kasoo jeeda magaalada Hargeysa lagu caleemo saaro degmada Lughaya . Qorshaha dariiqani oo hadda ka hor madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Bare ku fashilmay inuu dhiso sababtoo ah reer AWdal oo diiday in dariiqa laga leexiyo magaalada Borama ayaa mar labaad soo laba kacleeyey mudo yar kadib markii uu Axmed Silaanyo la wareegay xukumada Jamuuriyada Somaliland.
Dhinaca Jabuuti raali kama aha dariiqan xeebta la marinayo waayo madaxweynaha Jamuuriyada Jabuuti Mudane Ismaciil Cumar Geeleh waxa uu fahansan yahay siyaasada dhulboobka ah ee daba socota dhismaha Jidkan ” sidan waxa saylac.com u sheegay Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Jabuuti oo aanu kula kulanay guriga baarlamaanka dalka Jabuuti.
Iyadoo hada ka hor saylac.com ay dhawrbilood ka hor idiin soo gudbisay heshiis isaguna qarsoodi ah oo xukumada Silaanyo ay la gashay niman tijaar ah si dhul aad ubalaadhan uga helaan magaalada xeebta ku taala ee Lughaya arintan dhismaha Jidka xeebta ayaa waxa uu noqon doonaa mid sahla qorshayaasha fog ee sharikadaha tijaarka Hargeysa ay ku damacsan yihiin inay ku fuliyaan mashruuca dadeynta xeebaha Awdal .
Arintan ayaa waxa kale oo ay caqabad ku noqon doontaa dhismaha Jidka aadka loogu baahan yahay ee Dilla ilaa Jabuuti waxana dadka reer AWdal ee ku dhaqan magaalada Jabuuti ay labadii maalmood ee inaga tagtey is weydiinayaan sababta keentey in reer Awdal ay ka indho laayihiin qorshayaasha dhulboobka ah ee lagu hayo . Oday Maxamed Cilmi Waaberi oo ka degan magaalada Jabuuti waxa uu yidhi ” Waligay ma arag nin gurigiisii inta la dumiyo ninkale guri ka dhisanayo oo isaguna aan waxba kala socon.
Hadaba sidaad nooga barateen lana daawada Filim Documentary ah oo ka kooban laba qaybood kana hadlaaya dedejinta dhismaha Xeebta oo aanay reer AWdal waxba kala socon.
Cururdaar Hadalka Sheekh Siiro waa laga jaray qaybo aad xasaasi ah oo sheekhu taabtey
Heshiis sadexgeesood ah oo dhex maray Somaliland, Jabuuti iyo Dalka Jabaan si saldhig ciidamada Badda ah looga dhiso Jasiirada Sacadadiin.
Wasiirka Dufaaca dalka Jabaan Kitazawa
Djibouti(Saylac.com) – Shabakada saylac.comayaa waxay ogaatey heshiis qarsoodi ah oo sadexda dal ee Somaliland, Jabuuti iyo Dalka Jabaan ay ku kala saxeexdeen dalka Jabuuti . Heshiiskan ayaa sadexda dawladood kaga wada hadleen sidii ciidamada badda dalka Jabaan ay u heli layaaheen saldhig rasmi ah oo ay kala dagaalamaan budhcadbadeedka badaha Soomaaliya.
Waraaq uu ku saxeexan yahay Wasiirka dufaaca Dalka Jabaan Mudane Kitazawa ayaa waxa ku qornaa in ciidamada qalabka sida ee dalka Jabaan ay yihiin oo kaliya kuwo loo tababaray dufaaca dalka Jabaan balse hadda ay siyaasadaasi is bedeshay ka dib markii budhcadbadeedka Soomaalidu ay caqabad weyn ku noqdeen isku socodka maraakiibta caalamka . Wasiirka dufaaca dalka Jabaan Mudane Kitazawa wuxuu intaa ku daray in dalka Jabaan uu aad u danaynayo inuu saldhigan cusub ee uu ka dhisanayo jasiirada Sacadadiin ee gobolka Awdal ay noqon doonto mid wax weyn ka tarta la dagaalanka Budhcadbadeedka Soomaaliya.
Jasiirada Sacadiid ee gobolka Awdal
Heshiiskan ayaa ah mid lagu dhisayo laba saldhig ciidanka dalka Jabaan ee badda . Saldhiga hore oo hadda dhismihiisu ka dhamaaday dalka Jabuuti waxa la filayaa in bisha June ee inagu soo socota si wada jir ah munaasibad weyn ay ugu furi doonaan sadexda dawladood ee Somaliland, Jabuuti iyo Dalka Jabaan.
Saylac.com ayaa waxay ogaatey in saldhiga kowaad ee laga dhamaystiray dalka Jabuuti uu xadhiga ka jari doono Madaxweyne Ismaciil Cumar Geeleh.
Dhismaha saldhiga cusub ee laga dhisi doono Jasiirada Sacadiid ayaa isna la sheegay inuu bilaabmi doono bisha afraad ee sanadka 2012 waxana la filayaa inuu dhamaan doono bisha 3aad ee sanadka 2014.
Dawlada Somaliland oo heshiiskan ku heshay lacag dhan laba boqol iyo sideetan milyan oo doolarka maraykanka ah waxay balan qaadey inay si buuxda u dhawri doonto heshiiskan Jasiirada Sacadiin lagaga dhigayo saldhig ciidanka Badda dalka Jabaan yeesho.
Dhinaca dalka Jabuuti waxa la sheegay inay heshiiskan ka faa’iiday lacag dhan afarboqol iyo lixdan milyan oo doolarka maraykanka iyo mucaawino dhinaca mashaariicda horumarineed oo dalka Jabaan siin doono dalka Jabuuti.
Wasiirka dufaaca dalka Jabaan Mudane Kitazawa ayaa sheegay in kasta oo dalka Jabuuti dalka Jabaan u jiro masaafad dheer oo dhan 10,000 kilometers hadana maanta Jabuuti ay tahay dal aad dalka Jabaan ay dhinaca dufaaca baddaha iskaga mid yihiin aadna xidhiidh weyn ula leh dawladaha caalamka kuwa ugu quwada badan.
Wasiirku waxa uu intaa ku daray in dalka Jabaan uu wadi doono xidhiidhka uu la leeyahay dalka Jabuuti iyo Jamuuriyada Somaliland oo uu ku tilmaamay inay geesinimo ugu deeqday Jasiirada Sacadiid oo ku taala goob istaraatiji ku ah lagadaalanka budhbadbadeedka Soomaalida.
Wararkan saylac.com waxa siiyey xubno xog ogaal u ah heshiiskan sadex geesoodka ah ee dhex maray sadexda dal.
Wixii warar ah kala soco isha wararka lagu kalsoon yahay ee saylac.com
Top video -Prof . Xasan Farax Warfaa oo talooyin usoo jeediyey Xukumada Somaliland..
Dhegayso Madaxweynaha Puntland oo dabafuray Wasiirka Arimaha dibada Somaliland
Universal Tv oo caalamka tusay Xafladii Awdal State ee Ottawa
Halkan ka daawo shacbiyadda ciyaarta sayliciga iyo heesaha kale ee somalidu ay ku lahaayeen dalka kuweyt wakhtiga qaarkii Posted by Admin on June 1, 2011 Rate This
Waa Laga Gudbay Xilligii Habacsanaanta & Walaahawga
TUESDAY, 31 MAY 2011 20:15
Tababar Ku Saabsan Isku-xidhka Qorshayaasha Horumarineed ee Dawladda iyo Ka Qayb-Galinta Doorka Dadwaynaha‏
FRIDAY, 03 JUNE 2011 12:25
Jigjiga(CakaaraNews) Tababar Ku Saabsan Isku-xidhka Qorshayaasha Horumarineed ee Dawladda iyo Ka Qayb-Galinta Doorka Dadwaynaha
Tababarkan oo ay ka soo qayb galeen xafiisyada waxbarashada, caafimaadka, beeraha, warbaahinta,sportiga, arimaha haweenka, …
Shir lagu Yagleelayo Qaab-dhismeedka Iskaashatada Hoyga iyo Guriyaynta Garsoorayaasha DDS oo ka dhacay Maxkamadda Guud‏
THURSDAY, 02 JUNE 2011 13:08
Jigjiga(CakaaraNews) Si Tayada Nolol-Dhaqaale ee Garsoorayaasha DDS kor loogu soo qaado looguna abuuro Nolol degan Guud ahaan Garsoorayaasha DDS ayaa ay Maxkamadda Guud ee DDS go’aansatay isla-markaana door-bideen lagama-maarmaanimada in Garsoorayaash…
War Deg Deg ah oo kasoo Kordhay Jabkii UBO ee Goljano
WEDNESDAY, 01 JUNE 2011 08:17
Goljano (CakaaraNews) Sida lawada ogsoonyahay waxaa dhawaan Degmada Goljano Indhaha loogu shiday shacir adagna loogu dhigay Nabad diidka Budhcada UBO oo laga laayay in kabadan kontan halka kuwo kale oo badana gacanta lagu dhigay.
Haddaba iyadoo magacya…
Bishaaro Dadweynow Shabakada Cakaara TV oo Dibu Habayn Lagu Sameeyay Qaybta TVga
« page19 by giriyaadnews page21 by giriyaadnews »